Posted by အမေ့သား at Sunday, December 16, 20122comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Tuesday, October 16, 20125comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Wednesday, October 03, 2012 1 comment: Links to this post
ရင်မှာပိုက်ပြီး နေခဲ့ တဲ့ အမေ့သား
အမေ့ကို မမှီတောင် အမေ့နောက်က
ကိုယ့်မျက်နှာညိုမှာစိုး တဲ့ သူ
စုထားတဲ့ သူ့ မုန်ဖိုး
သူ့ အနား ဆွဲခြင်းလေးဆွဲပြီး
ရေခြားမြေခြားမှာ နေနေရတဲ့ 
တလတခါ အစဉ်မပြတ်ရေးပို့ သူ
အမောပြေစေမဲ့သူ့ ရုပ်လွှာ
မကြာခဏ ပေးပို့ သူ
ဖုန်းဆက်ခဲ့ ရင် အမြဲတမ်း
မခွဲအတူနီးရဖို့ကြိုးစားပါလို့ 
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ တဲ့ သူ
အဖေ ၊ အမေနဲ့ မခြား
ယောင်းမနဲ့ အတူ မညူဆူ
ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်း များနဲ့ 
ထိုထိုသို့ သော ကျွန်တော့ကိုချစ်သောသူ
ဤကဲ့သို့ သော ချစ်ရသူရဲ့မွေးနေ့ လေးဟာ
ကျော်ဖြတ်ခဲ့ ရလို့နှစ်သိမ့်အားပေးနေခဲ့ ရခြင်းကြောင့်
မွေးနေ့ တိုင်းရေးပေးခဲ့ တဲ့ စာလွှာလေးကို
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ ချစ်သူ
(၄၇)နှစ်တောင်အောင် မင်းနဲ့ အတူ
ကိုယ်တို့ ရဲ့ သားသမီး
ဘဝဆက်တိုင်း မင်းနဲ့ အတူ
Posted by အမေ့သား at Monday, September 10, 20124comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Thursday, September 06, 20122comments: Links to this post
အမေကိုချစ်တဲ့ အမေ့သားအတွက် ရန်ကုန်ပြန်လက်ဆောင်လေးတခုအမှတ်တရထာဝရအဖြစ်ဝယ်လာခဲ့ မိတယ်။
အဖွင့်မှာကတဲက့ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်စေတဲ့ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာရဲ့ 
မိခင်ရုပ်တုဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကအမေ့သားအတွက်အမေ့ကိုပိုချစ်ပိုတန်ဖိုးထားစေဖို့ 
တိုက်တွန်းပေးလိုက်တဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ။
အရေးအဖွဲ့ ကပြောင်မြောက်ပြီးလှပတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေက ရင်ကိုငြိစေခဲ့တယ်ဆိုရင်မမှားနိုင်ပါ။
Posted by အမေ့သား at Sunday, September 02, 2012 No comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Tuesday, June 12, 2012 No comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Sunday, April 29, 20123comments: Links to this post
လျင်ဆင်းလာခဲ့သည်။ မဟာဝိဇိရဘုရားဖက်သို့ကူးမည့်တံတားအနီး လူငယ်ပိုင်းချာတိတ်နှစ်ယောက် စာကလေးဌက်များထည့်ထားသောလှောင်အိမ်လေးကိုယ်စီဖြင့်ကုသိုလ်ပြုလွတ်ပေးမဲ့ သူကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ကျွန်တော်သူတို့ အနီးရောက်တော့ အစ်ကို စာကလေးတွေ လွှတ်ပါအုံး ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ လှောင်အိမ်ထဲမှစာကလေးများသည် တောင်းပန်နေဟန် သူတို့ အားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါရန် ပြောဆိုနေ သယောင် ထင်မြင်ကြားယောင်မိသည်။
တစ်ကောင်ဘယ်လောက်လဲကွ! (၁၀၀) ပါ အစ်ကို…. အေး……သက်စေ့ဆိုတော့(၃၆)ကောင် ပေးကွာ………….လွှတ်မယ်။ မင်းမှာ(၃၆)ကောင်ပြည့်လို့လားဟု ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ ရတယ် အစ်ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစီက ခဏချေးလိုက်မယ်။ အောင်အောင်….. ငါ့ကိုစာကလေး(၁၀)ကောင် ခဏချေး။ ညနေကျရင်ပြန်ပေးမယ်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းစာလေးများကိုတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လွှတ်ပေးနေ
သည်။ နီးစပ်ရာသစ်ပင်ပေါ်ပျံတက်သွားသောစာကလေးများကြည့်ရင်း.. မင်းတို့ ဘဝလေးအေးချမ်းလွတ်လပ် သလို ငါ့ဘဝလေးလည်းအေးချမ်းလွတ်လပ်ပါစေလို့ ရင်ထဲမှာကြိတ်ဆုတောင်းမိနေသည်။စာကလေးဖိုးပိုက်ဆံ
ရှင်းပေးရင်းစောစောကချာတိတ်ပြောသော ညနေကြရင်ပြန်ပေးမည်ဆိုသောစကားကို သတိရမိကာ ကိုယ့်ညီ မင်းတို့ စာကလေးတွေကို ဘယ်လို ဖမ်းလို့ မင်းသူငယ်ချင်းကို ညနေပြန်ပေးမယ်လို့ မင်းပြောတာလဲ?
ထိုသို့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ အံ့သြသောအမူအရာဖြင့် ကြည့်ပြီး ဖမ်းစရာမလိုဖူးအစ်ကို ညနေကြရင်
သူတို့ ဘာသာသူတို့ ပြန်လာကြတယ်။အနားရောက်တော့မှ ဖမ်းပြီးလှောင်အိမ်ထဲထည့်လိုက်ရုံပဲ။ ကျွန်တော်အတော်ကြီးကို အံ့သြသွားသည်။ ဘယ်လို ဘယ်လို ရှင်းစမ်းပါအုံး ကိုယ့်ညီ။
ကျွန်တော်ပြောပြရင် အစ်ကို ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ကို နားလည်ပေးနိုင်မှရမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီအလုပ်ကို မလုပ်ချင်ပါဖူး ဒါပေမဲ့ လွယ်လင့်တကူ ငွေရှာလို့ ရနေလို့ သာလုပ်နေရတာပါ။ အရေးထဲ ဆရာသမားက နိဒါန်းတွေနဲ့ လုပ်နေတော့အေးပါ ငါ နားလည်ပါတယ်ကွာ ပြောစမ်းပါ။
ဒီလို အစ်ကို .... အစ်ကို အခုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ စာကလေးတွေက ဒီဝန်းကျင်မှာရောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လူတွေရဲ့ သားကောင် တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အလုပ်သမားတွေပဲအစ်ကို။ တွေ့လား..အစ်ကို။ လှောင်အိမ်ထဲက အစာခွက်နဲ့ ရေခွက်၊ အဲ့ထဲမှာ မူးယစ်စေတဲ့ ဆေးတမျိုး ဆေးခြောက်လို မျိုးပေါ့ ထည့်ထားတယ် သူတို့ စားသောက်ပြီးရင်မှိန်းနေကြတယ် ဘယ်မှ မပျံဖူး။ နေစဉ်စားသောက်နေတော့ ဆေးစွဲတဲ့ လူတွေလိုပဲ ဖြစ်နေပြီ။ဘာမှသူတို့မသိဖူး အဝေးကို ပျံသွားရမှန်းလည်းမသိအချိန်တန်စားရဖို့ လောက်နဲ့ လှောင်အိမ်ဟာသူတို့ဗိမ္မာန်လို့ မှတ်ထင်နေကြတယ်။ ဒီတော့ အခုအစ်ကို လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့တွေ အဝေးကို မပျံဖူး။ နီးရာသစ်ပင်တွေမှာပဲနားနေကြတယ်။ညနေအိပ်တန်းတက်ချိန်ရောက်တာနဲ့
လှောင်အိမ်လေးကိုင် အသံပေးလိုက်တာနဲ့ သူတို့တွေ ကျွန်တော်တို့အနီးကို ပျံဆင်းလာကြတယ်။ အဲဒီအခါအသာလေးဖမ်းလှောင်အိမ်ထဲပြန်ထည့်၊ အစာကျွေးတော့ သူတို့ပျော်တောင်နေသေးတယ်အစ်ကို
ခဲ့မိသည်။ ထပ်တူကျနေသော ဘဝနှစ်ခု…….
ချာတိတ်ပြောသွားသောစကားများတွင် သူက…အလုပ်ရှင်…စာကလေးများက သူ့အလုပ်သမားများ
အလုပ်လုပ်ရာနေရာက လှောင်အိမ်။ သေချာပြီ…သွေးထွက်အောင်မှန်နေလေပြီ….
မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်ကာလက ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးမို့ ဖွင့်ချင်တဲ့အခါဖွင့် မလုပ်ချင်သောနေ့ပိတ်ထားပြီး
များနဲ့တူလာသည်၊မနက်အလုပ်သွား…ညနေအလုပ်ပြန်နဲ့ ဘဝသည်အသားကျကာပျော်ရွှင်လာပြီး စင်ကာပူ
သုံးလိုက်စွဲလိုက်နဲ့ဘဝကိုသာယာနေခဲ့ကြတယ်၊အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပြန်ကြတော့လည်း လွတ်လပ်ပြီးဆိုသောစိတ်ခံစားမှုကပြန်တုံးခဏသာပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီး ရက်နည်းနည်းကြာလာသည်နှင့်
လည်း ဘယ်ကစပြီးဘာလုပ်ရမည်မသိ…စုံစမ်းရင်းပါလာတာလေးတွေကုန်ပြီး စင်ကာပူပြန်ရောက်လာကြ
ကျွန်တော်လည်း လွတ်လပ်ပြီကွဟု ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ပြီး မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်၊လွတ်လပ်ပါ
Posted by အမေ့သား at Tuesday, April 10, 20123comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Monday, February 13, 20123comments: Links to this post
Vista's Colorful Planet: “Stop PushingaReligion ...